Maraykanka iyo Ingiriiska sidee u qasi karaan amniga dalka xilli ayna jirin Somali hub isku haysta - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Maraykanka iyo Ingiriiska sidee u qasi karaan amniga dalka xilli ayna jirin Somali hub isku haysta
Kooxda sheegata beesha caalamka ayaa si cad u sheegtay inay qasi doonaan amniga dalka haddayna barlamaanka qaranku ka noqon wadada ay qaadeen ee ah in dalku aado doorasho toosa kadib markii ay dawladu dhinacna uga dhaqaaqi waydey shuruudaha cusub ee kolba la hordhigo.
”Warbixin isla socota oo ay halmar soo wada saareen ayay ku sheegeen dalalka Maraykanka iyo Ingiriiska inay dalka qasi doonaan amnigiisa. Waxaadse is weydiin kartaa sidee u qasi karaan ayadoo hadda aan ognahay in aanu jirin qabaailo hub isku haysta iyo dawlada oo la dagaalaysa aan ka ahayn argagixisada ayuu yiri Cali Calasow.
Waa ta koowaade waxay ku qasi karaan ayagoo adeegsan doona argagixisada sida hadda ay ugu adeegsadaan Suuriya taas oo keenaysa qaraxyada oo bata iyo dilalka qorsheysa. Waxay hadda adeegsanadaan idaacadahoda beenta dhura ee bbcsomali iyo Voasomali si ay sumcada uga dilaan madaxda dalka una bedelaan fikrka dhalinta.
Waxay maalin kasta noo sheegaan in madaxweynuhu la xirtey Turkiga iyo Qadar waxana taas sheegay safiirkoodii hore inayna jeclayn iskaashigaas, waana halka weerarku kaga socdo waayo waxa jira horumar socda oo la diidan yahay sida ciidamada dhismaya ayuu yiri Xuseen Warsame.
Waa ta labaad ee isku dayi karaan oo ah inay inqilaabaan madaxweynaha ama khaarajaan maadaama ayna ka fogeyn madaarka iyo madaxtooyada. Waxana muhiima in hadda wixii ka dambeeya madaxweynuhu adkeeyo amnigiisa, dabcan hadday wax soo gaaraana aan ognahay inaan cidkale ku eedayn karin.
Xamaas oo si toosa u garaacday Talabiib markii ugu horeysay iyo dhismayaal gubanaya
Gantaalaha Xamaas ayaa ka dul qiiqay caasimada Yuhuuda ...
Sacuudiga oo Khamiista ciidaya halka Somaliya weli la sugayo warka ciida
Sacuudiga ayaa sheegay inayna ARAG bishii Soonfur isla ...
Dawlada Somaliya oo jawaaab ka bixin doonta duulimaadyada ay Kiiniya joojisay
Dawlada Somaliya ayaasheegtay inay jawaab ka bixin doonto ...
Kiiniya waxa lagula dhaqmayaa wixii lagu arko
May, 10, 2021
Inkastoo la soo celiyay xiriirka labada dal ee ...
Dawlada Somaliya oo beenisay in qaadka Kiiniya la fasaxay
Dawlada Somaliya ayaa beenisay in qaadka Kiiniya la ...
Dagaal oogeyaasha Hawiye oo dalbadey in maleeshiyadii ay ku awrkacsadeen ciidanka lagu celiyo
May, 1, 2021
Dagaal oogeyaasha Hawiye ee sheegan jirey magaca musharixiinta ...
Dil ay gaysteen booliiska Maraykanka oo markii ugu horeysay lagu farxay
Booliiska magaalada Kansas ayaa xaqiijay toogashada gacan ku ...
Haddii xoolo la qalqalo dawlad lagu bedeli karo imisa dawladood ayaan bedeli karnaa
Madaxweynaha Somaliya ayaa markale tanaasulkii ugu dambeeyay sameeyay ...
Raiisal wasaaraha oo diidey in mooryaan direyska ciidanka xiran lagu daro ciidanka
Waxa maalin dhaweyd Muqdisho soo galay ciidan beeleed ...
Dawlada Somaliya oo jawaab degdega siisay kooxda beesha caalamka
April, 14, 2021
Dawlada Somaliya ayaa jawaab degdega siisay kooxda beesha ...
Dhiigmiiratada shabaab oo isku qarxisay maqaaxi iyo dhalinyaro ay xasuuqeen
April, 3, 2021
Booliiska magaalada Muqdisho ayaa ka waramay khasaaraha ka ...
Raiisal wasaaraha oo sharaxay waxa fashiliyay kulan uu la qaatay musharixiinta Hawiye
March, 5, 2021
Waxa xalay aroor hore burburey kulan u dhexeeyay ...
Copyright © 2021 Araabinews.com All Rights Reserved